Iimpawu zoThengiso lweeNkcazo zokuThengisa - Izibonakaliso zokuThengiswa kweeNkcazo ngeFxPremiere
YITHETHA IZIMPENDULO ZEMISEBENZI
I-TOP FX INDICATOR
XHUMANA NEZIFUNDO ZABASEBENZI
IMISEBENZI YONYAKA YONYAKAuvule i-akhawunti ye-forex
Iimpawu zokuthengisa ze-Forex ezisebenza
Izibonakaliso ze-Forex ngeFxPremiere
1. Imiqondiso yeeNkcazo zeMihla ngemihla
Khetha kwiiphakheji ze-Forex Signals. Ingaba ungumthengisi oqalayo okanye uthengise ixesha elifutshane, iinketho zethu zephakheji zihamba kuzo zonke iinqanaba zabahwebi.
2. Gqiba ukuthenga kwakho
Ukusebenzisa iindlela zokuzihlawula ezikhuselekileyo, qhubeka nje kunye neNketho yeNtlawulo. Siyamkela iKhadi leKhadi, iDebit Card, Skrill, Neteller kunye namanye amaninzi amakhadi afana neMaestro njl.
3. Hlola i-imeyili yakho eyamkelekileyo
Xa sesifumene intlawulo yakho, kungekudala uza kufumana i-imeyile yethu eyamkelekileyo. Ukuphendula kwisicelo sethu se-imeyile, ngoko ulungele ukuhamba.
4. Vula i-Akhawunti ye-Forex kunye noMthengisi oLawuliweyo
Vula i-Akhawunti ye-Forex kwi-website yethu. Okanye sebenzisa umthengisi wakho. Izibonakaliso zethu zokuthengisa zangaphambili kwi-platform yonxweme.
Ngokumalunga ne-TOP FX Signals
Ukuthumela iimpawu zokuthengisa ukusuka kwi-2010
Iimpawu zemihla ngemihla
Izibonakaliso zokuThengiswa kweeNkcazo ngeFxPremiere Group. I-EUR / USD, i-USD / i-CHF, i-EUR / i-CHF, i-USD / i-CAD, i-USD / i-JPY, i-GBP / i-USD, i-EUR / i-GBP, i-AUD / i-USD, i-CHF / i-JPY, i-AUD / i-JPY, i-EUR / i-JPY, i-NZD / i-JPY, i-GBP / JPY, i-NZD / i-USD, i-GOLD, i-CRUDE OIL. Ukurhweba imarike yashishini lokutshintshiselana kwamanye amazwe ngokuphathelele ukwenza inzuzo engaguqukiyo kunye nokunciphisa ubude belahleko-ukunyusa imida yabaphumeleleyo bakho. Nge-FxPremiere ungayisebenzisa ngokunxulumene ne-smart FX ye-algorithms yegama lokuthengisa, ukulawula umngcipheko wakho kwaye ugcine uhlahlo lwezorhwebo lwakho phantsi ngaso sonke ixesha. Izibonakaliso zethu zangaphambili zezorhwebo zibonelela ngexesha elizayo eliza kubalwa kwangaphambili. Ukusebenzisa izibonakaliso zeFxPremiere Fx kwi-Trading uza kufumana iimpawu eziphezulu zamanqanaba onke!
+ I-50 iminyaka IMIBUZO EMAKHAKHAKHINI A-CAPX
INKQUBO YOKUPHATHISWA KWENKQUBO YOKWENZA I-BRNERS AWARD 2018
Imihla ngemihla i-Whatsapp kunye neeTelegram
Iimpawu zokuThengiswa kweeNkcazo zeeNkcazo zokuFunda
Indlela yokuThengisa ngeHlabathi
Inyathelo 1: Qonda i-Market Forex Indlela yokuThengisa i-Forex - Ukuqonda ngokucacileyo inkcazo ye-forex esetyenziswa ngokuqhelekileyo kuya kwenza ukuba ukungena kwakho kumarhwebo kube lula. Amanye amagama kunye neengongoma ozivayo ngokuphindaphindiweyo ziquka: I-currency base: Imali oyibambe. Ukuba uvela eUnited States, imali yakho yesiseko[...]
I-Forex - I-Dollar Flat njengeStump in Sterling Limits drops
I-FxPremere.com I-Forex - I-Dollar Flat njenge-Slump kwi-Sterling Limits drops - FxPremiere.com - I-dollar yase-US yayisicatshulwa ngokuchasene nabadlali bayo ngoMsombuluko njengokuba i-wobble in sterling yanceda ukutshabalalisa ilahleko kunye nedatha ebonisa imakethi yezindlu yase-United States yaqhubeka igxotha. Isalathisi se-dollar yase-US, esilinganisa i-greenback ngokubhekisele kwibhasikidi enesisithandathu esorhwebo[...]
Ubutyebi bubhekiselele ekusebenzeni kweemarike. Inqunywe ukuba bangaphi abarhwebi abaqhuba ngokurhweba kunye nenani elipheleleyo labo bathengisa ngaphambili. Esinye sezizathu zokuthengisa imarike yangezwe langaphandle kukuba i-liquid isela ii-24 iiyure ngosuku. Kwakhona imarike enzulu kakhulu, phantse[...]
I-Forex - I-Sterling Drifts Ngaphantsi nje ngoMeyi ilungiselela i-3rd Brexit Voting
I-FxPremiere.com - I-pound yaseBrithani ikhupha i-dollar ne-euro ekuqaleni kweLwesihlanu eYurophu, idibanisa inzuzo yeveki njengoko iimarike zithatha isisombululo seentsuku ezimbalwa ezinokuxhamla kwi-Brexit. UNdunankulu uNkk. Theresa May ulungele ukucela abenzi bomthetho ukuba bavotelwe kwiSivumelwano sokuKhutshwa kunye ne-EU[...]
Amanyathelo okuqala kwihlabathi le-Forex
Amanyathelo okuqala kwihlabathi le-Forex - Nasi isikhokelo sethu sabahwebi abaqalayo kwimakethe ye-Forex. I-tutorial forex trading tutorial yenziwe ngabathengisi abaqeqeshiweyo beenkampani zeFxPremiere abanamava amaninzi abancedisa ukwandisa isakhiwo kunye neziqulatho zayo. Ukuba awuqhelani nemiqathango kwaye awunayo[...]
Izizathu zokuba kuthengiswa kwe-intanethi kuyabonakala
Ngokuthengiswa kwe-intanethi, unokuphelisa nantoni na inokwenzeka yokujongana nommeli ongathandabuzekiyo okanye ojongene nomthetho osebenzayo ukuze azuze iimfuno zakhe ngendleko yotyalo-mali. Ukuthengiswa kwe-intanethi kuye kwaba lixesha kuwo onke amakhaya kulo lonke ilizwe. Iyaqhubeka nokwandisa ekuthandeni kwaye ngakumbi phakathi kwabantu abatsha. Ukuthengiswa kwe-intanethi[...]
I-Forex - IiTanks eziSterling kwi-Brexit Legal Advice
I-Forex - IiTanks eziSterling kwi-Brexit Legal AdviceFxPremiere.com - I-British Pound yaguqula ukuzuza kwangaphambili ngoLwesibili, ukuwa kumanqanaba aphantsi asemini njengengcebiso esemthethweni kwi-Brexit ibonise ukuba ingozi esemthethweni yokuba i-UK ingabanjwa. I-GBP / i-USD yehla i-1.03% ukuya kwi-1.3014 ngu-07: 30 AM ET (11: 30 GMT), emva[...]
I-Forex - I-US Dollar yehla
I-FxPremiere.com - I-Forex - I-US Dollar yehla I-greenback iyancinci ngoLwesihlanu emva kwedatha kubonisa ukuba uqoqosho lwase-United States longeze imisebenzi ye-20k ngo-Feb 2019, ngaphantsi kwezilindele, njengoko uqoqosho lufumana umsebenzi ogcweleyo. Amanani athetha umfanekiso odibeneyo wezempilo kwimali yaseUnited States, njengoko izinga lokungabikho kwemisebenzi liye lahla. US[...]
EUR / USD Uhlalutyo lobuGcisa: I-Euro Drops Trending
I-EUR / USD Uhlalutyo lobuGcisa: I-Euro Drops I-STRATEGY: I-BEARISH i-Tepid ye-Euro i-stair rebound stairs kwi-Jan 2018 kufuphi nexesha elide lokubeka izikhundla zokutshintshwa kwe-bearish ezinokubakho ziza kubakho phambili Abadayisi banokufuna ukuqinisekiswa kokuphuma kwe-Euro. vs Dollar yase-US ukususela ngoJan 2018 kwakhona. Ukubonakala kwesibane sokukhanyisa isibane saseShooting Star[...]
Funda ukuThengiswa kwangaphambili
Isikolo sePips Siyakwamkela! Ingaba utsha ukuya kutshatyalaliswa phambili? Isikolo sePips yinkqubo yethu ye-intanethi ye-intanethi enceda abaqalayo ukufunda indlela yokuthengisa i-fx. Ukuba usoloko ufuna ukufunda ukuthengisa kodwa ungazi ukuba uya kuvela phi, ke le khosi yenzelwe wena. Yintoni i-Forex? Funda malunga nale nto[...]
I-Forex - I-PMI yokuqala iphakamisa i-Euro Emva kwemizuzu elungelelanisiweyo yokuThola
IFxPremiere.com - I-euro yajika i-dollar yase-US ekuthengiseni kwaseYurophu ngoLwesine, njengoko i-indices manager of indices evela eFransi naseJamani yatsho ukuba uqoqosho lwendawo ye-euro luya kuba lukhuni emva kokuncipha kwayo ekupheleni kwe2018. Kwi-03: I-30 AM ET, i-euro yayingama-$ 1.1358, ngezantsi kweeveki ezimbini[...]
Imigaqo Yobumfihlo | GDPR
I-Web Design ngu-SEO Experteer